Okusha okungu-5 koku-1 kokushisa kokushisa ...
8 ngo-1 combo ukushisa cindezela mac ...
Umshini omusha we-5 ku-1 wokushisa wokushisa ungasetshenziselwa ama-T-shirts, amakepisi, amapuleti e-ceramic, amathayili e-ceramic, ama-mugs, ama-coasters, amapuzzle we-jigsaw, i-lettering, nokunye okuhlukile. izindwangu nezinto zokwakha njll. izigaxa, ama-coasters, amaphazili we-jigsaw, ukubhala izincwadi, nokunye okuhlukile. izindwangu nezinto zokwakha njll Ingadlulisa izithombe ezimibalabala nezinhlamvu zokufaka inki yokuphrinta yaphansi nencibilikisiwe kuzinto zobumba, izibuko, nezindwangu ezifana nekotini, ifilakisi, ifayibha yamakhemikhali, inayiloni, njll.
Umshini wokushisa umshini wesigqoko ungaphrinta noma imuphi umbala omibalabala, isithombe se-portrait, iphethini yokwakheka komhlaba kanye nephethini eyenziwe ngezifiso esigqokweni, ikakhulukazi efanelekile ukukhangisa, izipho, izikhumbuzo, imisebenzi yokuphromotha, izinto ezenziwe ngezifiso nokunye.
Lo mshini we-clamshell 38 * 38cm wokushisa ungadlulisa izithombe, amagama kukotini, i-fiber, insimbi, i-ceramic, ingilazi njalonjalo, efanelekile ukukhiqiza isipho, isikhangiso nokunye. Ingakwazi ukusebenzisa ukudluliswa, izinhlamvu, izinombolo nezithombe kuma-T-shirts, izingubo, izikhwama, amacansi egundane, ama-jigsaw puzzle, amathayili e-ceramic, amapuleti nezinye izinto ezifulelekile. Kuzipho zokudala ze-DIY zentombi, izipho zabayeni, abangane, izingane, omakhelwane, nawo wonke umuntu ophakathi, kufanele ucabange ukuthi uthanda ini. futhi ubamangaze ngosuku olukhulu? Noma ucabanga ukwenza ibhizinisi elinjalo emakethe enkulu kangaka? I-15 × 15 Sublimation Heat Press izosiza.
请先 在 后台 设置 I-Paypal 收款 账户 ， 然后 刷新 页面！
Umshini woku-5 koku-1 wokushisa wokushisa ungasetshenziselwa ama-T-shirts, amakepisi, amapuleti e-ceramic, amathayili e-ceramic, ama-mugs, ama-coasters, amapuzzle we-jigsaw, ukubhala amagama, nokunye okungafani. izindwangu nezinto zokwakha njll. izigaxa, ama-coasters, amaphazili we-jigsaw, ukubhala izincwadi, nokunye okuhlukile. izindwangu nezinto zokwakha njll Ingadlulisa izithombe ezimibalabala nezinhlamvu zokufaka inki yokuphrinta yaphansi nencibilikisiwe kuzinto zobumba, izibuko, nezindwangu ezifana nekotini, ifilakisi, ifayibha yamakhemikhali, inayiloni, njll.
Umshini Wokucindezela Ukushisa] Usayizi wepuleti wokushisa uyi-12 ″ × 10 ″, Usayizi omkhulu ukuvumela ukuthi wenze amahembe kuwo wonke amalungu omndeni wakho. .
Lo mshini wokucindezela ukushisa ungadlulisa izithombe ezimibalabala, amagama asenkomishini, elungele ukukhiqiza izipho, imihlobiso, efanelekile ikakhulukazi ukukhangisa, izipho, imisebenzi yokuphromotha, izinto ezenziwe ngezifiso nezinye izimboni.
Lo mshini we-4 IN 1 cap wokushisa umshini wokuphrinta ungaphrinta noma imuphi umbala omibalabala, isithombe se-portrait, iphethini yokwakheka komhlaba kanye nephethini eyenziwe ngezifiso esigqokweni, ikakhulukazi efanelekile ukukhangisa, izipho, izikhumbuzo, imisebenzi yokuphromotha, izinto ezenziwe ngezifiso nokunye.
Lo mshini we-8 koku-1 wokushisa wokushisa ungasetshenziselwa ama-T-shirts, amakepisi, amapuleti e-ceramic, amathayili we-ceramic, ama-mugs, ama-coasters, ama-mouse pads, ama-jigsaw puzzle, i-lettering, nokunye okuhlukile. izindwangu nezinto zokwakha. Ingadlulisa izithombe ezimibalabala nezinhlamvu ze-inki yokuphrinta engaphansi futhi encibilikiswe kuzinto zobumba, izibuko nezindwangu ezifana nekotini, ifilakisi, ifayibha yamakhemikhali, inayiloni, njll.